တယ်ရုံလူမျိုး - ဝီကီပီးဒီးယား
တယ်ရုံ ( တရုံ သို့မဟုတ် တုလုံဟုလည်းခေါ်သည်) လူမျိုး (ရိုးရှင်းတရုတ်: 独龙族; ရိုးရာတရုတ်: 獨龍族; ပင်ရင်: Dúlóngzú ; endonym: Bodish pronunciation: [tə˧˩ɻuŋ˥˧ ə˧˩tsəŋ˥˧] )သည် လူမျိုးစုတစ်စု၏အမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်တရုတ်နိုင်ငံမှ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုထားသော လူမျိုးစု ၅၆ မျိုးအနက်မှ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းလူမျိုးဦးရေ ၆၀၀၀နီးပါးကို ယူနန်ပြည်နယ်ရှိ နူးကျန်းလီဆူကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုရှိ ကုံရှန်တယ်ရုံနှင့် နူကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခရိုင်တွင် တွေ့ရှိရသည်။ ထို့အပြင် တယ်ရုံလူမျိုး ၆၀၀ခန့်ကို ကုံရှန်တယ်ရုံနှင့် နူကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခရိုင်၏မြောက်ဘက်၊ ပင်ကျုံးလွော်ရွာအနီးရှိ နူမြစ် ( သံလွင်မြစ် )၏အထက်ပိုင်း တုလုံချိုင့်ဝှမ်းတွင်မြင်တွေ့နိုင်သည်။
တယ်ရုံ Drung Alternative names:
အများစု နေထိုင်သည့် နေရာ
ဆက်စပ် တိုင်းရင်းသား အုပ်စုများ
နူး၊ နုံ ရဝမ်
တယ်ရုံသည် တရုတ် - တိဗက်ဘာသာစကား များထဲမှ ဘာသာစကား တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်အက္ခရာစာပေမရှိသောကြောင့် စာမရေးတတ်ကြပေ၊ ယခင်က တယ်ရုံများသည်မက်ဆေ့ခ်ျများပို့လွှတ်ခဲ့ပြီးသစ်သားသစ်သားများပေါ်တွင်မှတ်သားခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
တယ်ရုံများ၏ မူလအစနှင့် ပတ်သက်၍ စာရွက်စာတမ်းအနည်းငယ်သာရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ထန်မင်းဆက် ကာလအတွင်း Derung သည် နန်ကျောက်ဘုရင်များစိုးစံသည့် Dali Kingdom တို့၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်သည်ဟုလူသိများသည်။ Tsawarong တောင်ဘက်စွန်းရှိ Derung ချိုင့်ဝှမ်းဒေသကိုတိဘက်များက Changyul သို့မဟုတ် Kiongyul ဟုခေါ် ကြသည် ။ ဆိုလိုသည်မှာဘီယာချိုင့်ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။  Yuan မင်းဆက် မှ Qing မင်းဆက် အထိ Derung ကိုဒေသခံတိဘက်သို့မဟုတ် Nakhi အု"ပ်စိုးသူများကအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတရုတ်ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုကြသည်။ ဒေသခံ Lama သည် Changputong ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည် Weixi သို့ပို့သည်။ ၁၉၁၃ တွင်ဒီနယ်သည်ဗြိတိသျှတို့၏တိုက်ခိုက်မှုကိုချေမှုန်းရန်ကူညီခဲ့သည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်မတိုင်မီအထိထိုလူမျိုးစုတွင်နာမည်များစွာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူတို့က Qing စဉ်အတွင်းယွမ်စဉ်အတွင်း Qiao နှင့် Qiu နှင့် Qu အဖြစ်အမည်များကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ထရုံလူမျိုး ၊ မြန်မာပြည်တွင် နေထိုင်သော တယ်ရုံများ၏အမည်။
↑ Gros, Stéphane (June 2016). "Tricks of the Trade: Debt and Imposed Sovereignty in Southermost Kham in the Nineteenth to Twentieth Centuries". Cross Currents: East Asian History and Culture Review (19): 154.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တယ်ရုံလူမျိုး&oldid=720053" မှ ရယူရန်
၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။